Dowladda Maraykanka oo balan qaaday soo celinta Qaaraankii Hay’adda WHO - Awdinle Online
Dowladda Maraykanka oo balan qaaday soo celinta Qaaraankii Hay’adda WHO
Maamulka Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay dib-u-soo-celin doonaan qeyb ka mid ah Maalgelintii ay ugu yaboohi jireen Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Telefishinka FOX News ayaa sheegay in ay arkeen qoraal qabyo ah oo ay Maamulka Madaxweyne Trump ku caddeeyeen Mowqifkooda ku aadan Bixinta Qaaraanka Hay’adda WHO, taas oo dhawaan Maraykanku jaray.
Telefishinku waxa uu sheegay in ay Maamulka Trump oggolaan doonaan in ay bixiyaan saami la mid ah kan ay Dowladda Shiinaha qaaraan ahaan ugu taakuleyso Hay’adda WHO sida ku caq qoraalka ay heshay FOX News.
Madaxweynaha Maraykanka waxa uu bishii hore ee April 14-dii hakiyey Qaaraankii ay siin jirey Hay’adda Caafimaadka Adduunka, isagoo ku eedeeyey in ay WHO ka taageertay Dowladda Shiinaha marin-habaabinta Faafista COVID 19, balse, Saraakiisha Hay’adda WHO waxay beeniyeen Eedeymahaasi.
Dowladda Maraykanka oo ah Deeq-bixiyaha ugu weyn ee Hay’adda WHO, waxay sanadkii hore bixiyeen in ka badan 400 million oo Dollar ama 15% Miisaaniyadda Guud ee WHO, halka ay Dowladda Shiinaha bixisay 86 million oo Dollar isla sanadkaasi.
Previous articleWanlaweyn: Dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo
Next article31 Waddan oo ay Somalia ku jirto oo Turkiga Albaabada u furay